Ny fakantsary fakan-tsary vaovao feno sary B&H dia maka sary an-tsaina ny fampivelarana | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » Featured » Ny fakantsary fakan-tsary feno B & H dia maka sary an-tsaina ny famokarana
Ny sary tsotra dia afaka milaza be dia be, ary ny fahazoana an'izany sary izany dia fanalahidin'ny fifandraisana ilaina amin'ny famoronana hamokatra ary hampitombo hatrany ny mpihaino. Izay matihanina miasa eo amin'ny indostrian'ny fahitalavitra dia mahatakatra fa ny sary ao ambadiky ny atiny am-peo dia afaka miresaka betsaka amin'ireo mpanatrika tadiaviny. Ary miaraka B & H ny Rafitra fakana sary feno vaovao, ny matihanina mandeha dia tsy hanahirana amin'ny fahazoana ny sain'ireo mpihaino azy.
B & H (Blimie & Herman) dia fivarotana sary sy fitaovana amerikanina. Ny orinasa voalohany dia naorina tamin'ny 1973, ary mitantana orinasa amin'ny alàlan'ny varotra mpanjifa an-tserasera, varotra mankany amin'ny varotra fandraharahana, ary ny toerana fivarotana iray any Manhattan, New York. B & H miasa toy ny mpamatsy fitaovam-pamokarana haino aman-jery vita amin'ny marika sy vokatra mifandraika. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana amin'ny fizarana Studio sy B2B azy, ny mpivarotra dia afaka manome ny mpanjifa ny fidirana amin'ny haitao avo lenta sy ny manam-pahaizana manokana amin'ny tsenan'ny famoronana votoaty. Ary ny tsenan'asa mandroborobo amin'ny votoaty toy ny indostrian'ny fahitalavitra dia hahazo tombony bebe kokoa amin'ny famoahana ny rafitra fakan-tsary feno indrindra, ny Sony PXW-FX9 XDCAM 6K.
Ny sary feno Sony FX9 dia manolotra ireo mpampiasa ny fahazoana maka sary / loko siansa hafahafa & fahaiza-manara-maso sy ny firaketana an-tsoratra miaraka amin'ny dikan-teny 2.0 an'ny FX9 firmware na VENICE firmware. Tsy maninona na ny mpampiasa iray no mitifitra fanadihadiana, hetsika, fahitalavitra, zava-misy, fampianarana na orinasa. Ankoatry ny Sony ny PXW-FX9 XDCAM 6K Rafitra feno fakan-tsary feno matanjaka sy mavitrika rafitra fanamalam-peo 4K azo fehezina, izy io dia ahitana koa ny endrika feno, oversampled 6K Exmor R CMOS sensor. Ity sensor ity dia mamela ny mpampiasa iray haka sary sary 4K miaraka amin'ny halalin'ny kianjan'ny cinematic, ary ny E-Mount PXW-FX9 dia vita amin'ny vy stainless ary mamela ny mpanjifa iray hampiasa lenta E-mount.
The PXW-FX9 fampidirana sy famoahana output dia 12G-SDI sy HDMI famoahana ho an'ny 4K, famoahana 3G-SDI ho an'ny HD, ary ny genlock sy timecode rehefa mampiasa fananganana multicamera. Ny rafi-pandrefesana Fast Hybrid AF dia mamela ny hisian'ny fifantohana marina ary mamela izany ny fikaroham-bahaolana hahita ny endriny tsy misy dikany amin'ny endriny 561. The PXW-FX9 mety hahatratra ny fanamafisana sary mivoatra amin'ny alàlan'ny gyroscope anatiny ho an'ny tifitra malefaka ary ho toy ny gimbal no nampiasaina. Ny fakan-tsarimihetsika 4-onjam-peo fakantsary dia ahafahan'ny mpampiasa mampiasa mikrôby ivelany ary mirakira feo mangatsiaka miaraka amin'ireo sarin-tsofina anatiny miaraka.
Ho fanampin'ny karazam-pandrefesana amin'ny alàlan'ny fakantsary, ny lokony sy ny hazavana fanatsarana dia misy ny alàlan'ny singa roa avoakan'ny ISO 800/4000, ary manampy azy amin'ny ankamaroany izany rehefa miatrika toe-jiro maivana na mampiasa lesoka miadana kokoa. Ny siam-pitaovana elektronika fitana elektronika 7-mijanona dia afaka manatanteraka amin'ny alàlan'ny mode auto na manual, manitsy tsara 1 4/1 ka hatramin'ny 128/XNUMX. The PXW-FX9 Ny fakantsary ihany koa dia manana lokon'ny loko S-Cinetone, izay manome endrika malefaka sy mazava toa azy Sonyfakan-tsary VENICE
Inona no azon'ny B&H atao amin'ireo mpampita ny fandaharana
Azo atao ny mampiasa ny orinasa amin'ny alàlan'ny fampiasana ny orinasa HP 15.6 ZONA 15 G6 Mobile Workstation, izay HP ZBook 15 G6 manaraka sy HP ZBook 17 G6 manaraka. Ireo dia solosaina tonga lafatra ho an'ny mpamorona, mpanonta horonantsary, ary mpamorona VR izay mila fampisehoana desktop, ary manome ny mpampiasa azy ny fahalalahana hiasa amin'ny tontolo rehetra.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny B&H, tsidiho www.bhphotovideo.com/.
B & H Fizarana B2B fampitana injeniera fampitana Engineering fampitana orinasa matihanina mpandefa Rafitra fakana sary feno FX9 firmware Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Fitaovana famokarana media Multi-Interface podcasting SoftAtHome, MStar, CES2017 Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Spears & Arrows Ultra HD Forum VENICE firmware lahatsary Video injeniera virtoaly zava-misy 2020-05-15